नकारात्मकता होइन आलोचना ~ Thinksphere
यति समय बितिसक्दा, कम्प्युटर र इन्टरनेट जडान गरेर मन्त्रालयलाई अत्याधुनिक बनाएको सामान्य गफभन्दा सुनाउने उपलब्धि पीएमओसँग केही छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अब सुनाउन बाँकी केही छ भने फेरि पनि तुकबन्दी, ओठे जवाफ, मिथक र इतिहासबारे काँचो–कचिलो पाण्डित्याइँ मात्रै हो ।
उनका बेतुक गफलाई महावाणीका रूपमा प्रचार गर्न उही पीएमओ खटिन्छ । सामाजिक सञ्जालका वैतनिक हल्लाखोरहरू त्यसैको बलमा क्रूर ठट्टा रचिरहन्छन् । पद एवं संस्थाको गरिमासम्म दाउमा राखेर चलाइएको यो उपक्रम चिर्न जिम्मेवार पत्रकारिता एवं निर्भीक लेखन आवश्यक छ ।
आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गरेको दाबी गर्ने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री सर्वथा निरीह छन् । प्रधानमन्त्रीमार्फत गरिने प्रायः नियुक्तिमा उनी पहिचान खुलेका दलाल र माफिया चुन्छन् । कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेर फिर्ता लिन्छन् । पछिल्ला केही घटनामा स्पष्ट लाचारी प्रकट गरेका छन् । उनी कसरी यति निरीह भए ?
नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि केही उदाहरणीय काम गर्ने ‘सुखद अवसर’ लाई घातक दुःखान्तमा टुंग्याउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली ‘टेक्स्टबुक केस’ बन्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा पीएमओ भनिने संरचना र त्यसले पाएको अधिकार कति दोषी छ ? उनको छनोटमा परेका सहयोगीको दोष के हो ? पार्टी र सरकार दुवैतर्फ उनले देखाएको दम्भ नै उनी असफल हुँदै जानुको कारण हो ? अथवा, धेरैले शंका गरे जस्तो, स्वयं प्रधानमन्त्री, उनको कार्यालय र सहयोगीजति सबै स्वदेशी एवं विदेशी माफिया र दलालप्रति मात्रै वफादार छन् ?
सोच्नुपर्ने विषय अरू पनि छन् । जस्तो— संघीय सरकारका केही मन्त्रीले पीएमओका अघिल्तिर आफूलाई शक्तिहीन सम्झन्छन् । कतिपयले आफूलाई निकम्मा तुल्याइएको महसुस गर्न थालेका छन् । निकटवर्तीसँगका निजी कुराकानीमा मन्त्रीका यस्ता गुनासा व्यक्त हुन थालेका छन् ।
मन्त्रीलाई निकम्मा सिद्ध गरेर सबै मन्त्रालय पीएमओले नै सञ्चालन गर्नु कति लोकतान्त्रिक हो ? शक्ति विन्यास गरिनुपर्ने संस्थामा प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालयको सोझो प्रभाव छ भन्ने पछिल्ला केही उदाहरणले प्रस्ट पार्छन् । संघीय संसदका सभामुखदेखि सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च पदासीनलाई समेत प्रभावमा राखेर कस्ता निर्णय गरिए, सूचनामा पहुँच भएका सबैलाई थाहा छ ।
कसैले यी सबै प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न सक्छ वा कुनै हलुका जवाफ दिएर टारिदिन सक्छ । अन्धसमर्थकले स्वयं प्रश्नमा ठूलो विदेशी षड्यन्त्र पहिल्याउन सक्छ । नेकपासम्बद्ध बुद्धिजीवीले हलुका आलोचनात्मक भएको स्वाङ पारेर कर्मचारीतन्त्रमा दोष थुपार्न सक्छ, मन्त्रिमण्डल हेरफेरको सिफारिस गर्न सक्छ । सरकारको समग्र उद्देश्य र नीति ठीक भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी भएकामा ‘आत्मालोचना गर्नुपर्नेमा जोड’ दिन सक्छ ।
घागडान मार्क्सवादीले ‘दलाल पुँजीवाद’ मा यस्ता घटना घट्नु कुनै अनौठो नभएको लामो व्याख्यान दिन सक्छ । सो व्याख्यानका आधारमा दलाल पुँजीवादको यो चरणले आफ्नो निश्चित आयु पूरा गरेपछि मात्रै थप केही नयाँ काम गर्न सकिने खाका तेर्स्याउन सक्छ । वा, पुँजीवादको एउटा खास अवस्थासम्म पुग्न ओली सरकारले अवलम्बन गरेको बाटो सर्वथा ठीक भएको ‘समाजशास्त्रीय विश्लेषण’ पनि सुनिन सक्छ ।
नकारात्मक प्रश्न गरेर पुँजीवादले हिँड्नुपर्ने यो अनिवार्य बाटोमा तगारो नबन्ने सकारात्मक सुझाव तेर्सिन सक्छ । वा, ठूला क्रान्तिकारीहरू संसदीय व्यवस्थामा खोट भएकाले अनिवार्य नियति नभोगी सुख नभएकामा ढुक्क देखिन सक्छन् । यी सबै बुद्धिविलास भइसक्दा पनि माथि गरिएका प्रश्नले राख्ने तथ्यपरक उत्तरको भोक मेट्न सक्दैनन् ।
आलोचनात्मक प्रश्न उठाउँदा सरकार मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा फस्न सक्ने भन्दै खबरदारी सुरु भएको छ । केपी ओलीको आलोचना गर्दा नेत्रविक्रम चन्दको जनवादी गणतन्त्र वा कमल थापाको हिन्दुवादी राजतन्त्रलाई बल पुग्छ भन्ने आशयसहित त्यस्तो खबरदारी गरिएको छ । अहिले सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्नेमा यिनै दुई शक्ति छन् । औपचारिक युद्धको घोषणा नगरे पनि सशस्त्र क्रान्तिका लागि तम्तयार रहेको विप्लवी आह्वान सुनिएको छ ।
राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतमका शब्दमा भन्दा, त्यही बहानामा ‘राज्य आतंक’ का दुःखद शृंखलासमेत सुरु भएका छन् । विभिन्न नाममा भएका विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । शान्तिपूर्ण बाटो अपनाउँछु भनेर जनताका अनेक असन्तुष्टि भजाउने यत्नमा कमल थापाहरू दत्तचित्त भएर लागेको छर्लंग छ । उस्तै असन्तुष्टि भजाएर ज्ञानेन्द्र शाहले बलमिच्याइँ गरेको इतिहासको साक्षी भएकाले थापाको निम्छरो धम्कीले पनि सशंकित तुल्याएको हुन सक्छ ।
घोर दक्षिणपन्थी र सशस्त्र क्रान्तिको असान्दर्भिक लालसा राख्ने पार्टीभन्दा स्पष्ट दूरीमा रहेर सरकारलाई लोकतन्त्रको मर्म सम्झाइरहेको सानो समूह पनि छ । सानो संख्यामा रहेका जिम्मेवार पत्रकारले सीमित स्रोत र आफ्नै संस्थाबाट पाएको कच्चा भरोसाको आडमा शक्तिशाली मानिस र संस्थाले गरेकाबिझ्याइँ सतहमा ल्याएका छन् ।
तिनले ल्याएका सूचनाका आधारमा आधारभूत प्रश्न सोध्न नहिचकिचाउने थोरै संख्याका लेखकहरूले हाँकका साथ प्रश्न उठाएका छन् । वस्तुपरक विश्लेषणमार्फत सरकारले गरेका नकाम उजागर गर्न सक्ने सानो संख्याका विश्लेषकले अप्ठ्याराका बावजुद आफ्ना मत सार्वजनिक गर्न छोडेका छैनन् ।
सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको थला पार्ने धम्की, सार्वजनिक सञ्जालको वैतनिक सेनाले गरेका अनेक बदनामी, तिनले लगाएका देशद्रोहीका लेबल, पत्रकारका भेषमा रहेका चाकरहरूको जत्थाले गरेको एकोहोरो खेदो, यी सबैको खासै पर्बाह नगरी उनीहरू बोलिरहेका छन् ।
यस्ता पत्रकारले लेखेका समाचार र सम्पादकीय, विश्लेषक एवं लेखकले लेखेका एकाध लेख र निबन्धले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउँदैनन् । विकासलाई ढंगले बुझ, उपभोक्तावादको मोहरोमा नफस, पानीजहाज र रेलका उडन्ते सपनाको जग हेर, संघीयता कार्यान्वयनमा सजग होऊ, समावेशिताको मर्म समात, पर्यावरणको ख्याल राख, निमुखाप्रति संवेदनशील होऊ भन्नु गणतन्त्रलाई सबल बनाउन खोज्नु हो ।
फरक मतका बावजुद उनीहरूले नै बनाएको संविधानको मर्म सम्झाउनु कुनै ‘र्‍याडिकल’ कुरा गर्नुसम्म पनि होइन । त्यसैले लोकतान्त्रिक धरातलमा उभिएर भइरहेका आलोचनाले राजतन्त्र वा जनवादी गणतन्त्रको कुनै पनि अभियानलाई सघाउँदैनन् । यी दुवै प्रवृत्तिलाई कसैले सघाइरहेको छ भने त्यो स्वयं सरकारले हो । अझ स्पष्ट भएर भन्दा, त्यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने काममा स्वयं पीएमओ, सामाजिक सञ्जालका ओलीपन्थी हल्लाखोर र पत्रकारका भेषमा रहेका प्रोपगान्डिस्ट नै तन्मयतासाथ लागेका छन् ।
आवश्यक सबै सूचना, कोषको मुख्य थैलो एवं शक्ति अभ्यासको अख्तियारीसमेत बोकेर बसेकाहरू बढी सचेत हुनुपर्ने हो । तिनले देखाएको दक्षिणपन्थी रवैयाले व्यवस्थालाई संकटग्रस्त बनाउन थालेको छ । संघीयता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता प्रावधान सकेसम्म चाँडो पंगु बनाउने उनीहरूको स्पष्ट ध्येय छ । साथै, धर्मनिरपेक्षताका पक्षपातीजति सबैलाई विदेशी क्रिस्चियन मिसनरीका दलाल भनेर लाञ्छित गर्नेमा पनि उनीहरू कटिबद्ध छन् ।
निहत्था कविलाई सामाजिक सञ्जालमा धम्क्याउने र बिनाकारण पक्राउ गर्नेसम्मका हर्कत गर्नुले जति व्यवस्थालाई क्षति गर्छ, त्यति कमल थापाका दुई–चार आमसभाले गर्न सक्दैनन् । सरकारको आलोचना भजाएर आफ्नो क्षणिक लाभ साध्न खोज्नेसँग सचेत हुनु ठीक हुन्छ । तर त्यसैका नाममा सरकारको आलोचनालाई ‘नकारात्मक’ भन्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:५२
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित / https://ekantipur.com/opinion/2019/07/19/156350202019447876.html